बेहोस अबस्थामा अस्पताल आएका युबकले होस खुलेपछि दिएको बयानले डाक्टरको नै उड्यो होस ! » बुद्ध भूमि नेपाल
आश्विनले भारतीय वानडे टोलीमा गर्लान् ‘कमब्याक’ ? यस्तो भन्छन् चोपडा
ह्वात्तै घट्यो सुन मूल्य, तोलाको कति ?
डिभोर्सको चर्चाकाबीच प्रियंकाले जब पति निकको भिडियोमा यस्तो कमेन्ट गरिन्
नेपालमा ‘ईपीएल’ खेलेका इकबालले न्यूजिल्याण्ड टूर गुमाउने, यस्तो छ कारण
फेवातालको विचमा चल्यो शसस्त्रको डरलाग्दो तालीम, पानी मै भयो यस्तो सम्म हेर्नुहोस् भिडियोमा
क्लार्कले बताए अब अष्ट्रेलियाको टेष्ट कप्तान बन्ने खेलाडीको नाम
श्रेयस अय्यरले देखाए यस्तो जादू, सिराज परे छक्क ! (भिडियोसहित)
खाना खाले बेला भएको त्यो झ’गडा जसले सबैलाई रुवायो ……
काठमाडौं । म’दि’रा पि’उ’नु हुँ’दै’न भनेर सल्लाह दिने गरिन्छ । तर पनि मान्छेहरु म’दि’रा बनाउछन् र पिउछन् पनि । मदिरा पिउदा र पछि धेरै नसोचेका दुर्घटनाहरु भएका छन् । यो बीचमा भारत, राजस्थानको ढोलपुर जिल्लाबाट एउटा अनौठो खबर बाहिर आएको छ ।
त्यहाँ म’दि’रा पा’र्टी’मा सहभागी तीन साथीले स’र्प’लाई भु’टेर खाएपछि बिरामी परेका छन् । त्यसपछि एक युवकको अवस्था गम्भीर बन्यो, जसलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ । युवकका परिवार सर्प खाएको खबर पाएपछि स्तब्ध भएको थियो । यो कुरा थाहा पाएर डाक्टरहरु पनि छक्क परेका छन् ।
प्राप्त जानकारी अनुसार पसल खोलेको खुसीमा तीन जना साथी मैदानमा मदिरा पार्टी गरिरहेका थिए । यसैबीच दुलोबाट सर्प निस्कियो । मदिराको तलमा तीनै जनाले सर्प समाते । स’र्प’लाई मा’रेपछि तीन जनाले सर्पलाई अगाडि र पछाडि गर्दै टुक्रा पारे ।
त्यसपछि उनीहरुले स’र्प’लाई भु’टे’का थिए । मदिराको तालमा तीन साथीले स’र्प’लाई भु’टे’र खा’ए’का हुन् । स’र्प खा’एप’छि अतर सिंह नामका व्यक्तिको अवस्था खराब भयो । अतर सिंहलाई जिल्ला अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । उनीबारे अहिलेसम्म कसैलाई थाहा थिएन ।
तर अस्पतालमा अतर सिंह होश आएपछि उनले स’र्प खा’ए’को जानकारी आफैं दिएका हुन् । त्यसपछि अस्पतालमा सबैको होस उड्यो । अतर सिंहको अवस्था ख’त’रामु’क्त र’हे’को बताइएको छ । एउटा व्यक्तिले स’र्प’लाई भु’टे’र खायो ।
त्यसपछि ती व्यक्तिको स्वास्थ्य बिग्रियो र उनी बेहोस भए । घटना ढोलपुर जिल्लाको कौलारी थाना क्षेत्रको पिपरी पुरा गाउँको हो । अन्य दुई जना साथिहरुले पनि स’र्प खा’ए’का थिए तर उनीहरुलाई असर नपरेको बताइएको छ ।
७ मंसिर २०७८, मंगलवार १५:३५
७ मंसिर २०७८, मंगलवार १५:०५
७ मंसिर २०७८, मंगलवार १४:५७
७ मंसिर २०७८, मंगलवार १४:०४
७ मंसिर २०७८, मंगलवार १३:३८
७ मंसिर २०७८, मंगलवार १३:१८